Ekliziastis 12 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
12 Cheta Onye Okike Ukwu+ gị n’oge ị bụ okorobịa,+ tupu oge ọdachi erute,+ ma ọ bụ tupu afọ ndị ahụ erute, mgbe ị ga-asị: “Ha adịghị atọ m ụtọ”;+ 2 tupu anyanwụ na ìhè na ọnwa na kpakpando agbaa ọchịchịrị,+ ígwé ojii abịaghachi, oké mmiri ozuzo esochiekwa; 3 n’ụbọchị mgbe ndị na-elekọta ụlọ+ na-ama jijiji, mgbe ndị ikom nwere ume huuru ehuru,+ mgbe ndị inyom na-egwe nri+ kwụsịworo ịrụ ọrụ n’ihi na ha dịzi ole na ole, mgbe anya gbaworo ndị inyom na-elepụ anya na windo+ ọchịchịrị; 4 mgbe e mechiworo ọnụ ụzọ e si abanye n’okporo ámá,+ mgbe ụda nkume igwe nri na-adịkwaghị adapụta adapụta,+ mgbe ube nnụnụ na-emete mmadụ n’ụra, mgbe olu ụmụ nwaanyị niile na-abụ abụ na-adịkwaghị adapụta adapụta.+ 5 Ihe dị elu na-atụzi ha egwu, ihe na-emenye ụjọ adịrịkwa n’ụzọ. Osisi almọnd amaakwa ifuru,+ ụkpara adọkpụrụ onwe ya na-aga, mkpụrụ osisi kepa agbawaakwa, n’ihi na mmadụ na-aga n’ụlọ ya nke ọ ga-ebi ogologo oge,+ ndị na-akwa ákwá arịrị agagharịakwa n’okporo ámá;+ 6 tupu e wepụ ụdọ ọlaọcha, a kụriekwa ọkwá ọlaedo,+ kụwaakwa ite dị n’isi mmiri, mgbe e gwepịaworo wiil e ji esere mmiri n’olulu mmiri. 7 Ájá ewee laghachi n’ala+ dị nnọọ ka ọ dịbu, mmụọ+ alaghachikwurukwa ezi Chineke+ onye nyere ya.+ 8 “Ihe efu kasị ihe efu niile!” ka onye mkpọkọta+ kwuru, “Ihe niile bụ ihe efu.”+ 9 E wezụga na onye mkpọkọta maara ihe,+ ọ na-akụzikwara ndị mmadụ ihe ọmụma mgbe niile,+ o chemiri echiche, meekwa nchọpụta nke ọma,+ ka o wee hazie ọtụtụ ilu n’usoro.+ 10 Onye mkpọkọta gbara mbọ ịchọta okwu dị ụtọ+ na ide okwu ziri ezi bụ́ eziokwu.+ 11 Okwu ndị maara ihe dị ka ndụdụ e ji achị ehi,+ ndị na-emikpu onwe ha n’ịchịkọta ahịrịokwu dị iche iche dịkwa ka ntu a kụmiri akụmi;+ o si n’aka otu onye ọzụzụ atụrụ.+ 12 N’ihe ọ bụla ọzọ ma e wezụga ihe ndị a, nwa m, nara ịdọ aka ná ntị a: Ide ọtụtụ akwụkwọ enweghị njedebe, mmadụ imikpu onwe ya na ha na-akpatara anụ ahụ́ ike ọgwụgwụ.+ 13 Ebe a nụworo ihe a dum, ihe bụ́ nkwubi okwu bụ: Tụọ egwu ezi Chineke,+ debekwa ihe o nyere n’iwu.+ N’ihi na ọ bụ ya bụ ọrụ dum dịịrị mmadụ. 14 N’ihi na ezi Chineke ga-ekpe ụdị ọrụ niile ikpe, tinyere ihe niile zoro ezo, iji kpebie ma ọ̀ bụ ihe ọma ma ọ̀ bụ ihe ọjọọ.+